မင်းရဲ့ sm နဲ့ LEGO stop-motion movies တွေကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲartဖုန်းကို
06 / 08 / 2021 07 / 08 / 2021 မင်းသမီး Emma Kennedy 337 Views စာ0မှတ်ချက် 10255 ညီလာခံရင်ပြင်, 10264 ထောင့်ဂိုဒေါင်, 10278 ရဲစခန်း, ၇၅၂၉၀ Mos Eisley Cantina, ဆောင်အပျိုရံ, ကြောကျတိုငျ, Creator Expert, မင်းသမီး Emma Kennedy, Lego, Lego Creator Expert, လူကြီးများအတွက် Lego, Lego Star Wars, Obi-wan kenobi, သဘော, ရေနံချောင်း, အုတ်တွေနဲ့အနားယူပါ, Star Wars, Star Warsမျှော်လင့်ချက်အသစ်, မလှုပ်နဲ့, YouTube ကို
စာရေးဆရာ၊ ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာနှင့် Lego YouTuber Emma Kennedy သည်ကျွန်ုပ်တို့အားအောင်နိုင်ရေးသင်တန်းတစ်ခုပေးသည် Lego လှုပ်ရှားမှုရုပ်ရှင်များ။
တစ်ခါတစ်ရံမှာငါထိုင်နေရင်းနဲ့ Lego သွန်း၊ ငါ့အိုးတွေ၊ အပိုင်းအစတွေနဲ့အစုံအားလုံးကိုကြည့်ပြီးငါသူတို့ကိုသူတို့စိုက်ကြည့်နေတဲ့ဘားအားလုံးမှာငါဘာလုပ်နိုင်လဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအံ့သြနေမိတယ်။ အမဲသားတစ်ခြမ်း (သို့) ကြက်အသေကောင်ကဲ့သို့အရာအားလုံးကိုကောင်းကောင်းအသုံးချသင့်တယ်လို့ငါထင်တယ်၊ Lego အဘယ်သူမျှမချွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒါကမင်းရဲ့ modular အဆောက်အ ဦး တွေကိုအံသြစရာကောင်းလောက်အောင်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဒါမှမဟုတ်မင်းရဲ့လက်ချောင်းအဆုံးနဲ့ပုံသဏ္န်သေးသေးလေးတွေကိုတွန်းချလိုက်တာဘဲ၊ မျက်လုံးတစ်စုံကိုစိုက်ကြည့်တာလောက်ပဲလုပ်နိုင်တယ် ဒါဆိုမင်းရဲ့အရာနဲ့မင်းဘာလုပ်နိုင်လဲ Lego မင်းကအရွယ်ရောက်ပြီးချိန်တွေကစားနေတဲ့အချိန်တွေကိုမကြည့်ဘဲမနေနိုင်ဘူးလား။
သိသာထင်ရှားသည့်အဖြေသည်သင်၏ set ap ကိုယူရန်ဖြစ်သည်art အုတ်နှင့်အခြားအရာတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပါ၊ ၎င်းသည်သင်၏အိတ်ဟုသင်ထင်လျှင် ဦး တည်သွားပါ ရေနံချောင်း အကြံဥာဏ်မျိုးစုံအတွက်
ဒါပေမယ့်မင်းကငါနဲ့တူရင် ap ကိုယူဖို့စိတ်ကူးတယ်art သင့်ရဲ့မိတ္တူ 10278 ရဲစခန်း အစား Corner Hotel တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်သည်အရောင်ဖျော့ခြင်းထက် ကျော်လွန်၍ ၎င်းကိုသင်စဉ်းစားရင်းပင်ဗိုက်အောင့်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည်၊ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်သည်သင့်အား (က) သင့်အားအစုံကိုပြသပြီး b) မယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင်အချိန်ပေးလိမ့်မည်။ အဲဒါကိုရင်ဆိုင်ကြစို့။
ချစ်သောမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အဖြေက stop-motion animation ပါ။
Bricks With Relax မှာ၊ ငါခဏခဏ AFOLWAC (အရွယ်ရောက်ပြီးသူပရိတ်သတ်များ) ကိုကာတွန်းတစ်ခုလုပ်ဖို့တောင်းဆိုလိမ့်မယ်။ Lego Chums ဘယ်သူလဲ) သူတို့ရွေးချယ်တဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုထဲကို ၀ င်လာဖို့အတွက်လတ်တလောတောင်းဆိုချက်ကမြင်ကွင်းကိုအသက်သွင်းဖို့ပါ Star WarsObi-Wan Kenobi က Stormtrooper ကိုပြောပြနေတဲ့မျှော်လင့်ချက်အသစ်ကဒါတွေကသူရှာနေတဲ့ droids တွေမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် AFOLWAC ရဲ့ minifigure Obi-Wan ကစားခြင်းနဲ့။
ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မင်းထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်။ အင်း၊ မဟုတ်ဘူး၊ မင်းရပြီဆိုရင်မဟုတ်ဘူး ၇၅၂၉၀ Mos Eisley Cantina မင်းရဲ့နောက်ကစင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။ ဒီ set ကအရမ်းမျှော်လင့်ချက်မဲ့တာဘဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Lego နတ်ဘုရားတွေငါနောက်ဆုံးတော့အဲဒါကိုသုံးနိုင်တယ်။
ရုပ်ရှင်များမှအကြိုက်ဆုံးမြင်ကွင်းများကိုထပ်တူပြုခြင်းသည်ကောင်းသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်art: သင်လိုက်နာရန်အမြင်အာရုံရှိသည်၊ တေးသံကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်သင်ကြိုက်လျှင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ပါ။ ကျွန်မအကြိုက်ဆုံးထဲကတစ်ခုကတော့သတို့သမီးအရံတွေကအစာအဆိပ်သင့်တဲ့မြင်ကွင်းကိုပြန်ရိုက်တာပါ။ ထိပ်တန်းအကြံပေးချက် Lego မီးတောက်များသည်အလွန်ကောင်းမွန်သော projectile အန်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။
stop-motion animation အတွက် download လုပ်နိုင်တဲ့တောက်ပတဲ့ app တွေအများကြီးရှိပါတယ်၊ သင်လှိမ့်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်၊ အဲဒါကမင်းရဲ့ရိုက်ချက်ကိုချိန်ညှိပြီးတော့ဘောင်တစ်ခုစီရိုက်တာရဲ့ကိစ္စဘဲ။ မင်းမှာဖန်စီကင်မရာမလိုဘူး၊ ငါငါ့ iPhone ကိုသုံးတယ်၊ မင်းကိုင်ဖို့ tripod မရှိရင်တော့အဲဒါကိုထုတ်လို့ရတယ်။ Lego.
အကောင်းဆုံးရလဒ်များအတွက်သင်၏ရိုက်ကူးရေးအပိုင်းသည်ကောင်းစွာလင်းနေသည်ကိုသေချာပါစေ၊ ဒါပေမယ့်အရိုးသားဆုံးပြောရရင်မင်းရဲ့ minifigure လမ်းလျှောက်မှု (ခြေထောက်တစ်ဖက်၊ အပေါ်တက်၊ လက်တစ်ဖက်ကိုအပေါ်တက်၊ နောက်တစ်ဖက်ကိုပြန်ဆင်း) တာကိုမင်းကျွမ်းကျင်သွားပြီဆိုရင်မင်းထွက်သွားပြီ။ Sticky putty သည်သင်၏ minifigure ကိုမျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် studs များမပါဘဲကပ်ရန်အလွန်အသုံးဝင်သည်၊ ၎င်းသည်သင်၏ minifigures များကိုပြန်လည်စီစဉ်သောအခါ၎င်းတို့မလှုပ်ရှားနိုင်အောင်မည်သည့် baseplate ပြားကြီးများကိုမဆိုလုံလုံခြုံခြုံကောင်းကောင်းထားနိုင်သည်။
နောက်ခံကားများသည်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ သင်ပုံနှိပ်နောက်ခံကြီးကြီးမားမားပုံနှိပ်ထားသောနောက်ခံနှစ်ခုတွင်သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုပေမည်။ ကောင်းကင်သည်အသုံးဝင်သည်၊ သို့သော်ကျေးလက်၊ ကမ်းပါးများသို့မဟုတ်မြို့ပြရှုခင်းကိုလည်းသုံးနိုင်သည်။ မင်းမှာနောက်ခံကားမရှိရင်စိတ်မပူပါနဲ့၊ ဒါကမင်းရဲ့ modular အဆောက်အ ဦး တွေအတွက်အဆင်ပြေတဲ့နေရာဘဲ။ လမ်းမြင်ကွင်းတစ်ခုလိုသလား။ မင်းရဲ့လုပ်ရပ်ကိုရှေ့ကရပ်ပါ 10264 ထောင့်ဂိုဒေါင် or 10255 ညီလာခံရင်ပြင်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်တော့မှပုန်ကန်မခံရဘူး 10278 ရဲစခန်း.
ငါကာတွန်းကိုသိပ်မကောင်းဘူး။ ငါလုပ်သောရုပ်ရှင်တိုများသည်အနားတစ်ဝိုက်တွင်ကြမ်းတမ်းသည်။ ဒါပေမယ့်အရေးမကြီးပါ။ အလွန်ပျော်စရာကောင်းသည်၊ ဤနေရာတွင်လက်တစ်ဖက်နှင့်ခြေထောက်ကိုဇွတ်အတင်းရွှေ့ပြီးနာရီပေါင်းများစွာအကြာတွင်၎င်းသည်အဆုံးထုတ်ကုန်ကိုကြည့်ရသည်မှာအလွန်ကျေနပ်စရာကောင်းသည်။
ထူးခြားချက်အချို့ရှိသည် Lego YouTube ရှိ animators များ၊ သင်ထုတ်လုပ်နိုင်သည့်အရာများကိုသင်အံ့သြလိမ့်မည်၊ သို့သော် Top Gun ကိုပြန်လည်ဖန်တီးရန်မလိုအပ်ပါ။ Lego (တစ်စုံတစ်ယောက်ရှိသည် ဒါကိုတကယ်လုပ်ခဲ့တယ်မယုံနိုင်စရာပါပဲ) - သင်လိုအပ်တာကမင်းကိုယ်မင်းပျော်ရွှင်ဖို့ပါ၊ ဒါကြောင့်အဲဒီ minifigures တွေကိုရွှေ့ပါ။
← LEGO သည် ၇၁၀၃၁ ၌ပျော်ရွှင်သောအပြုံးမျက်နှာများအားလုံးကိုရှင်းပြသည် Marvel စတူဒီယို
Lego Ideas 40487 Sailboat စွန့်စားမှုလက်ဆောင်နှင့်အတူပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း →